व्यवसायको योजना बनाएपछि के गर्नुपर्छ ? - उद्यमी नेपाल Udhyami Nepal
व्यवसायको योजना बनाएपछि के गर्नुपर्छ ?
व्यावसायिक योजना व्यवसायको सफलताको आधार हो तर, योजना बनाउने वित्तिकै व्यवसाय सफल नै भैहाल्छ भन्न सकिँदैन। त्यसैले योजनाअनुसार आवश्यक कामको तयारी गर्नु पर्दछ। जस्तै:
व्यवसायिक योजना अनुसार व्यवसाय संचालन आरम्भ गर्नु पर्दछ। जस्तै: आवश्यक पूँजीको लागि उपयुक्त वित्तीय संस्था छनोट गर्नु पर्दछ। व्यवसाय सुरुवात गर्नका लागि आवश्यक तयारी गर्नु पर्दछ। कामदारहरुको व्यवस्था गर्नु पर्दछ र आवश्यक सामानहरुको चाजोपाँजो मिलाउनु पर्दछ।
नियमित अनुगमन अर्थात कम्तीमा महिना-महिनामा योजना अनुसार काम भए नभएको हेर्नु पर्दछ। व्यावसायिक योजना पछिको अर्को महत्वपूर्ण काम भनेको व्यवसायको नियमित अनुगमन हो। व्यवसाय संचालन भइसकेपछि हरेक महिनामा काम नियमित रुपमा भइरहेको छ छैन त्यसको लेखाजोखा गर्नु पर्दछ र आवश्यकता अनुसार कामको तरिकामा हेरफेर गर्नुपर्दछ।
सम्बन्धित व्यक्ति तथा संघ संस्थासंग समन्वय गरिरहनु पर्दछ।
व्यवसाय गाईड व्यवसाय योजना सुरुवात